यो बोझ तपाइँको छैन | Apg29
स्पष्ट तरिकाले सबै डर, र भयले हाम्रो मुश्कि&#
प्रेरित भनेर डर हामीलाई नाम गर्न सकिँदैन तर अक्सर बिरामी-स्वास्थ्य, केहि हामीलाई भोजन, लुगाफाटा किन्न सक्षम र डर को शीर्ष मा छ कि भाडामा भुक्तानी गर्न सक्षम छैन एक काम बिना हुन र यसरी।
एक किसानले आफ्नो पछाडि ठूलो भारी बोरा संग मिल बाट भयो। एक घोडा आए र चालक जाँदै प्राप्त गर्न किसान प्रस्ताव राखे। किसान उहाँले जाने पायो आफ्नो फिर्ता खुसी मा झोला तल बसे। ड्राइभर सोध्छन्:
"किन तपाईं बोरा छन्?"
"यो झोला जान हुनेछ मा, दुवै म möcke लागि राम्रो हुनेछ," किसान जवाफ दिन्छन्।
परमेश्वरले आफ्ना मद्दत प्रदान गर्दछ जब हामी अक्सर गर्छन।
स्पष्ट तरिकाले सबै डर, र भयले हाम्रो मुश्किल र शत्रुहरू को छ भनेर पत्ता?
हामी त्यहाँ डर र हामीलाई गलत कामहरू बनाउन डर छ कि सधैं बुझ्न छैन।
हामी तपाईँलाई starved सर्प मा लङ्गडाको घूर फिर्ता निश्चित अघि यसको सिकार hypnotizes गर्दा भविष्यमा प्रतिस्थापन महसुस गर्न सक्छन् भनेर बुझ्न बस रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सजिलै बन्द हतार त वा हामीलाई समतल राख्नु र के हामी के र आफूलाई थप समस्याहरूको दिन हुँदैन।
प्रेरित भनेर डर हामीलाई नाम गर्न सकिँदैन तर अक्सर बिरामी-स्वास्थ्य, केहि हामीलाई भोजन, लुगाफाटा किन्न सक्षम र डर को शीर्ष मा छ कि भाडामा भुक्तानी गर्न सक्षम छैन एक काम बिना हुन र यसरी। त्यसैले पैसा बिना हुन। तपाईं पैसा धेरै डर दूर Chase गर्न सक्नुहुन्छ तर यो सजिलै अस्तित्वको slightest हावाको भ्कोका संग झटका रूपमा टाढा एक soaring सुरक्षा छ।
एक्लै हुनुको भन्दा ठूलो छ को छैन को डर, राम्रो पर्याप्त रहेको छैन प्रेम भइरहेको। आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीको भविष्यको लागि डर। छोराछोरी स्कूल जाने डर बाँचिरहेका छौं। अनुहार incomprehension र तंग भइरहेको। येशूले यस बारे थाह ठीक किनभने, उहाँले हामी भोजन, लुगाफाटा, वा हाम्रो जीवन चिन्ता हुँदैन भनेर हामीलाई भन्नुहुन्छ।
कुनै एक नै समय मा दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। (लूका 6:24) त्यसैले पक्ष रोज्नुपर्छ? हो, येशू clarifies। तपाईं एकै समयमा दुई सेवा गर्न प्रयास भने, यो "मालिक" एक घृणा र अन्य प्रेम हुनेछ। त्यसैले कुनै मध्य जमीन छ। हाम्रो डर र गर्न डर यसलाई के हो? यहाँ येशूले क्रिस्टल स्पष्ट व्याख्या दिन्छ।
"तपाईं परमेश्वर र mammon सेवा गर्न सक्दैन। (= मुद्रा र सम्पत्ति), आफ्नो जीवनको बारेमा, तपाईं खान के हुनेछ वा पेय, न त आफ्नो शरीर, तपाईं तपाईंलाई लुगा लगाउनु हुनेछ के चिन्ता छैन। "
उहाँले चरा स्वतन्त्रित अस्तित्व सम्झन्छन्। परमेश्वरले हामीलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ र हामी उहाँलाई हाम्रो भगवान हुन अनुमति जब हामी उहाँले हाम्रा पिता हो भनेर प्रमाण प्राप्त हुनेछ। "तपाईंको पिता तपाईं उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी, सबै यो आवश्यक छ कि पहिलो थाह (यहाँ प्रतिज्ञा आउँछ) र तपाईं सबै बाँकी हुनेछ। "गाडी" मा आफ्नो विशेष "बोरा" राख्नु र तपाईं को हेरविचार र डर पैदा गर्न परमेश्वरको प्रतिज्ञा मा जानुहोस्।
डर लागि सबै भन्दा राम्रो उपचार
डर लागि पावलले सर्वश्रेष्ठ उपचार उहाँले हामीलाई उहाँले, कहिलेकाहीं आकाश उठाएको, दुवै भोक भएको र राम्रो बस्ने, कुटपिट गरिएको थियो, थियो फिक्री छ कसरी प्रेम र घृणा र मृत्यु धम्की अन्तर्गत जीवित बताउँछ जब दिन्छ। सबै चाहनाको हामी उहाँ सधैं खुसी हुन र जीवनको अवस्थामा सबै परमेश्वरको धन्यवाद।
परमेश्वरलाई धन्यवाद यसलाई ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको इच्छा पनि हो। यो scares उडान गर्न डर र हाम्रो जीवनको सही मास्टर छान्ने हामीलाई मद्दत दिन जब "ढोका खुट्टा" र नडाकीकन पस्नु खोज्छ विना अधिकार घुस्ने व्यक्ति सेट डर।